Ciise Duufsado — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Ciise, waxaa ka buuxsamay Ruuxa Quduuska ah, oo Webi Urdun ayuu ka noqday, oo uu hoggaaminayo Ruuxa oo lamadegaanka ku yaal, halkaas oo afartan maalmood uu Ibliisku jirrabo. waxba, wuuna cunay Maalmahaasna, iyo dhamaadka iyaga wuu gaajaysnaa.
First, Halkaan hoose si sax ah uga wada hadlaan halka aan ka heli inaannu injiilka Luke's. wax yar ka hor, cutubka saddex, Yooxanaa Baabtiisaha waa ku wacdiyaya oo ku saabsan Ciise iyo kuwa kale oo ku baabtiisa, iyo Ciise wuxuu naftiisa ku yimaado inuu baabtiiso by. John ayaa ku baabtiisayay dad badan oo, laakiin markii Ciise la baabtiiso wax ka duwan dhacaya. Ruuxa Quduuska ah ka soodagi isaga on isagoo muuqasho jidh yeesho sida qoolley oo; iyo cod ka timaadaa hadalkii Samooyinka, "Waxaad tahay Wiilkayga aan jeclahay; aad la aan ku faraxsanahay. "Sidaas halkan Ilaah caawimaaddiisa ayaannu wax ku odhanaya Ciise inay u badan oo kaliya nin nebi ah oo Diintooda ka badan, ka badan oo kaliya Masiixa; Ciise yahay Wiilka Ilaah;.
Ka dib noo sheegtid dhawaaqo xaggii Ilaah ka, iyo ka hor noo sheegaya waxa Wiilka baabtiisay Ilaah samayn doonaa, Like ina siinaysaa in abtiriskooda la a, noo sheegtid isirka Jesus'. kuwii abtiriskooda lagu tagaa jidka oo dhan si ay Adam dib. Sidaas halkan waxaan leenahay Rabbi Ciise, kii ma aha oo kaliya Wiilka rabbaaniga ah ee Ilaah, laakiin uu sidoo kale waa farac ka mid ah Adam, ninkii ugu horeeyay. Ciise waa mid gaar ah. Ciise waa-nin Ilaah.
Sidaas, yaa ka fiican si ay u eegaan in ay bartaan sida ay tahay in aan ka jawaabo jirrabaadda? Sida aynu eegno Labadan aayadood, aynu doonayno inaynu u eegno saddex waxyaalood waa waxaannu xusuusan nahay marka aan jirrabaadda wajihi.
waxaan. Ilaah Kuu ogolaanayaa iyo Isticmaalo Duufsado Sida Qayb ka mid ah uu Plan (1-2a)
Ciise, waxaa ka buuxsamay Ruuxa Quduuska ah, oo Webi Urdun ayuu ka noqday, oo uu hoggaaminayo Ruuxa oo lamadegaanka ku yaal, halkaas oo afartan maalmood uu Ibliisku jirrabo.
Sidaas socda baabtiiskii Ciise, halkaas oo uu ku dhawaaqay in Wiilka Ilaah oo la jirta Aabbaha wuu ka raalli, aad ka fili karto in Ruuxa Ilaah keeni lahaa Ciise inuu abaalmarinta ka sharka Boqor Herodos, ama waxaa laga yaabaa isaga diro si toos ah u bilaabi wasaaraddiisa ee ku wacdiyaya oo u samaynaya calaamooyinkii iyo yaababkii. Laakiin that's meel aan Ruuxa Quduuska ah keenaysaa isaga. Halkii Ruuxa Quduuska ah isaga keenaysaa in lamadegaanka. Ruuxa Quduuska ah isaga keenaysaa in meesha aad meesha Ibliiska isaga jirrabi maayo.
Haddaba hubaal bannaan ee, ee Og Ruuxa Quduuska ogyahay inuu Ciise taasoo keentay in meesha aad meesha Shayddaanku isaga jirrabi maayo - si la mid ah in Ruuxa Quduuska ah ogaa in Acts 20, in uu ahaa Paul Yeruusaalem keentay, iyo in Paul waa la silcin doono iyo waxaa xabsi. Wuxuu Paul sheegayaa khatarta in uu yahay isaga ka hor, weli Paul qasba inuu tago inuu ku wacdiyo Injiilka. Xaaladdan waa ka duwan yahay no. Ruuxa Quduuska ah wuxuu og yahay in Ciise la hor doonaa oo loolan Ibliisku, weli wuxuu isaga waxaa si kastaba keenaysaa.
Maxaad Ruuxa Quduuska ah Ciise cidlada, halkaas oo uu la jirrabay doonaa diri lahaa? In light of dhawaaqo God's in Ciise yahay Ilaah ka farxisaa iyo Wiilka Ilaah, iyo Luke's in abtiriskooda oo muujinaya Ciise in uu noqdo ina Adam iyo sidoo, jirrabaadda this dhigaya goobta waayo, Ciise waa in la caddeeyo in uu yahay kan kaliya wuxuu wacdiyey in ay. Tani khilaafka cidlada ku siinayaa Ciise marxaladda inuu isu inaan noqdo kan ugu-Ilaah nin.
Washukrika ku dhowaad sida jidka badan oo ka jawaabay Heat Miami xilli ciyaareedkan. LeBron James waa MVP horyaalka, laakiin kooxdiisa ku guuleysan horyaalka loomana ogola. Waxa uu ka baxo Cavaliers Cleveland ee, iyo kooxaha la laba kale ciyaaryahano waa weyn. Oo markii ay kooxda ay ku tuuraan dabaal weyn, isufaan in, maxaa yeelay, talanti oo dhan waxay leeyihiin, waxay ku guuleysan doono 5, 6, 7 - laga yaabee in ka sii - horyaalka koox ahaan. Sidaas qof kasta ayaa dhageystay ay faanka, they've maqlay Crore ah oo dhan oo ku saabsan kooxda this super. Haddaba markii xilligu soo bilaabo waxay leeyihiin ilaa si ay u muujiyaan iyo isu caddeeyaan. Ma waxaad tahay koox this riyo la yaab leh in you've naftaada ku wacdiyey in ay? Iyo warbaahinta daawaday iyo dabagal ay ku kasta oo guurto si aad u aragto haddii ay qof walba kooxda taariikhi rajeynayay.
Well in fashion la mid ah, stage ayaa qarka u saaran, waayo, Ciise inuu isu inay tahay Wiilka Ilaah. ayuu ka farxin doontaa in Ilaah?
Waxaan qabaa karo oo ku saabsan Adam beerta. Waxa uu sameeyay ekaanshaha Ilaah, si ay u muujiyaan ammaan God's oo si gooni ah. Laakiin markaas jirrabi, abeesadii timaado in Eve iyo labadoodaba khiyaaneeyo. Waxay ku Cassiyaanna Ilaah, Mu'minaadka ah been abeesada badan, runta Ilaah aawadeed. Adam ma muujinayaan in kuwa Ilaah baa isaga u noqon. Waxaan Israa'iil arki cidlada ku guuldareysteen inay Ilaah addeecno. Waxaan u aragnaa in ka badan iyo in ka badan oo dhan Qorniinka. Ilaah nin si tasbiixso, laakiin nin ku guuldareysto iyo Caasiya Eebe.
Sidaas Adam labaad awoodi doonaan in ay sameeyaan waxa ugu horeeya ee aan u qaban karo? Ciise awoodi doonaan in ay sameeyaan waxa Israa'iil ma uu samayn karin? Markaasaa Ibliisku wuxuu uusan iman oo jirrabin Ciise afartan maalmood. Markaasaa Ciise ma muujinayaan in cidda uu wacdiyey in ay. Ciise shows Xaggiisa tahay Wiilka Ilaah oo u timid si ay naga badbaadi dembiyadayada iyo cidda our, wadaad sare oo aan dembi lahayn. Oo Ruuxa Quduuska ah waxaa isaga u soo diray in ay sidaas samayso.
Hadda, Waxaan sameyn waayey doonayo in hal dhibic si ay u noqon fahmay in ay ka dhigan tahay in Ilaah naftiisa jirrabay Ciise inay xumaan falaan. Taasi waa run ahayn. Laakiin waa mid aad u cad ee Kitaabka Quduuska ah in na la jirrabo inay sameeyaan wax shar aan ka baxsanayn Xukun God's. Washukrika ma wax ka yar radar ka sibxaday. Waxaa jira qofna iyo waxba oo dhan ka mid ah Abuuridda in uu yahay meel ka baxsan uu awood. Ilaah si buuxda u madax bannaan. Waxaa waxba dunida ka dhici kara iyada oo aan oggolaansho Ilaaheenna madax bannaan yahay. jirrabaadda Tani waxay dhacdaa idanka Ilaah. Ilaah waxa uu ogol yahay oo loogu talo galay in ay u isticmaalaan ammaantiisa xagga Ciise.
Walaalaha, James ka dhigayaa mid aad u cad in marka aan la jirrabo aan aan la jirrabo by Ilaah. Laakiin ha ogaadeen in Ilaah u ogolaanaya jirrabaadda oo uu damacsan yahay inuu u isticmaalaan ammaantiisa. Ilaah waa calool xumaaday by xaqiiqada ah in ay jiraan ciidamo ku xun dunida in ay isku dayaan in la xooggiisa ku doodeen oo aad weeciyaan Jidka xaqnimada. Laakiin ha ogaado in tempters kuwa jawaabi si Aabbihiinna jannada ku. Oo wuxuu isticmaali doonaa xataa iyaga u ammaantiisa.
Haatan waan ogsoo nahay waxaa jira dad badan oo naga mid ah, kuwaas oo mararka qaarkood fikrado cidhiidhi ah sida aan dunida Ilaah ku ammaani. Waxaan u maleynayaa in Ilaahna waa ku ammaanmay kaliya anagoo addeecsan dadweynaha sida Injiil la leenahay dalalka deriska la wadaago, ama quudinta dadka bilaa guryaha ah, ama ku wacdiyaya. Waxaan rabnaa in aad ogaato in tani ma aha nooca kaliya ee addeecidda in arrimaha. Labada dadweynaha iyo kuwa gaarka addeecidda arrin aad u badan. Waxaa ma u leeyihiin in ay dhagaystayaasha ah si aad u ammaantaan Ilaaha Caalamka.
Marka aynu nahay ee gaarka loo leeyahay, oo aan la jirrabo dembaajiyey, Ilaahna waa ku ammaanmay by our addeecidda. Ilaah waa ammaanmay markii aannu is-hor taagi been duufso cadowga, in aad raacdo amarka Ilaahayo wanaagsan. Waxaa weynaynaysaa wanaaggiisa, iyo runsheegnimada, iyo amar u leh inuu badbaadiyo dembilayaasha. Markaasuu walaalihiis wiilal iyo gabdhoba, mar kasta oo Ilaah waa idin soo ogolaanaya in laydin jirrabo, marxaladda loo dhigay si aad u ammaantaan Ilaaha by isaga Mu'min ah ka badan been cadowga.
Ilaah wuu leeyahay ujeeddo ogolaadeen in laydin jirrabo. Xaaladdan oo kale Ilaah wuxuu muujinayaa Ciise inay tahay Wiilka dembi lahayn Ilaah, kuwaas oo iska caabin kara jirrabaadda Ibliiska.
II.Weakness ma aha marmarsiinyo ay uga sii In To Duufsado
waxba, wuuna cunay Maalmahaasna, iyo dhamaadka iyaga wuu gaajaysnaa.
Sida Rabbi Ciise waxaa jirraba, Isagu waa in gobolka daciif ah oo nugul. Qoraalka waxaa cad in Ciise ayaa soomi jiray, waayo, 40 maalmood. At cidhibtii kuwii 40 maalmood Ciise gaajooday - taas oo u muuqata noocee ah cad; fikirto naftaada diido cunto 40 maalmood oo dhan.
Waxaan inta badan jecel yihiin in ay ka fekeraan Ciise sida Superman, laakiin Isagu ma uu ahaa Superman. Waxa uu ahaa ku-Ilaah nin. Waxaa jira kala duwanaan. Ciise wuxuu ahaa nin dhabta ah. Sidaas ma wuxuu ahaa difaaca si daal, ama daciiftinnimo, ama gaajo. Kiiskan, Shaydaanku jirrabo Ciise daqiiqad nugul sida uu gaajaysan. Oo isna wuxuu weeraraa Ciise gaar ahaan meelaha u ciyaaro si uu u tabar xaadirkan.
Wuxuu jirrabo Ciise boqortooyadiisii ​​oo dheeraad ah oo degdeg ah, cunto, wax uu xaq u hantidaan laga yaabaa. Wuxuu jirrabo Ciise wax ku noqon kara kasbatay uu, Laakiin Ciise qudhiisu wuu beeniyay. Ciise laftiisa halkan muujinaysaa, in uu noqdo oo uu dhalay nin kuwaas oo uusan ugu iman in loo adeego, laakiin inuu adeego.
Walaalaha, waa in aynaan nacasyo ku filan ahaan fikirin in Shayddaan baa naga ma weerari doonaan in times of tabar our. Waxaan akhriyey xigasho todobaadkan yidhi, "Kaliya Opportunity yimaado garaaca mar, laakiin jirrabaadda ay dhigaan on gambaleelka. "Duufsado si fudud aan ka tago. Jirrabaadda sii joogi doonaan oo idiin soo Dejinay xiran. Like howlno ee movies naxdin ku saleeyey in dhibanayaasha ilaa ay ugu danbeyn ku turaanturoon ama aad u daalan in mar dambe wax u ordaan. Markaasaa Shayddaan aan la sii socotay inay u qaataan si sahlan aad on in times of tabar. Shaydaanku waa cadow!
Tani waxay noqon lahayd sidii ciidanka logu dhaliilo ay cadaawayaashooda, iyo go'aan inay iyaga ka mid ah. Well, no, that's ma sida ay u shaqayso. Marka ciidamada qalabka sida aragto tabar a, in ay tahay markii ugu kaamil ah si ay u weeraraan sababtoo ah waxaa macquul ah guusha ka sareeyo. Well in si la mid ah, aduunka, jidhka, iyo Ibliiska ma dhigi doonaa off of beentooda in times of tabar. Sida xaqiiqda ah, ay ka badan aad weerari doonaan oo kaliya.
Sidaas daraaddeed sida Ciise u adkaysato Ibliiska wakhtiga uu tabar awoodi? Washukrika run in Ibliisku waligood fursad ay ku keeni Ciise dembi galay, laakiin sida Ciise isaga laga adkaado? Well, haddii aan eegay marinka hoose, waxaan arki lahaa oo Ciise sameeyey waxa Adam ma uu samayn. Ciise rumaysan yahay erayga Ilaah, ka badan Word Shayddaanka. Markaasaa Ciise doonistiisa gudbiyay doonista Aabbaha. In times of jirrabaadda, waxaan shouldn't isku day in aad iska caabin ah oo ay geyaan Diintooda. Maxaa yeelay, runta ma jiro oo naga mid ah waa xoog badan yihiin oo ku filan.
jirrabaadda Iskacaabinta in times of tabar bilaabmaa jidka hor jirrabaadda laftiisa. Iskacaabinta jirrabaadda aad la kulmi doono isbuuca soo socda bilaabmaa Isbuucaan. Maxay yihiin hadalladan aad qaadanaya? Maxay yihiin hadalladan aad naftaada buuxinno? Sidee ayaad nuujisaa iimaanka? Ciise waxa uu ahaa mid daciif ah. Laakiin in kastoo Ciise calool madhan, Wuxuu ahaa ka buuxaan Ruuxa. Waa in aan doondoono, sida Efesos dhiiri, in la buuxiyey - oo waxay hantiyeen by - Ruuxa Ilaah. Waa in aanu wejigayagii in Kalimadiisii, halkaas wuxuu ku siinayaa iyo haya rumaysadkeenna in ballamo uu. Oo annaguna waxaannu waa in arrintan loo sameeyo garab walaalaha our ee iimaanka.
Waxaa jira waqtiyo nolosheena gaarka ah marka aan dareento daciiftinnimo sababo kala duwan. Waxaa laga yaabaa inaan u daalan, ama dareen gubatid, ama buka, ama waxaa laga yaabaa we're sidaa looga dhaadhiciyey ee xoogga lahaa in we're daciif ah oo aan ka warqabin. Laakiin aan loo eegayn waxa itaaldarrada waa, ma washukrika cudur daar ah in la siiyo in. Inta lagu guda jiro kuwaas oo daqiiqado nugul ee dalabyo of jirrabi muuqan kara soo jiidasho, laakiin Ilaah Ereygiisa weli waa run, iyo seduction Shaydaanku weli waa been.
Marka you're jirrabay oo sinaystay xusuusinayaa in Ilaah wuxuu ku yidhi, "Adiguna ma waxaad tahay adiga kuu gaar ah, aad soo iibsaday qiimo. Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah jidhkiinna ku ammaana. "Oo markii you're jirrabay in ay faanbadan iyo danayste naftaada in Ilaah wuxuu ku yidhi xusuusiyo, "Ha kaliya fiirin our naftaada laakiin danaha kuwa kale." In times of tabar inaannu, sida Ciise, cuslaataan erayga Ilaah iyo isaga addeeca.
Akhrinta tuducdan aan tiirsan karo la niyad jabin, fekerayo, "Man, Ciise waa sidaas, anba quduus baan jeclaan lahaa in aan noqon karaa isaga oo kale,"ama, "Man, Folkeinformation dheeraad ah sida Adam ugu horeeyay ee ka badan labaad. Anigu waxaan ahay dheeraad ah sida Yoonis ka Ciise "Walaalaha., in ay tahay mid run ah Christian kasta iyo non-Christian. Waxaan nahay oo dhan sida Yoonis ka Ciise.
Laakiin wax ku saabsan addeecidda Ciise in aan akhriyo oo ku saabsan halkan waa in Ciise kaliya nin kale ma ahaa. Ciise ma ahayn oo keliya mid ka mid kale oo naga mid ah, kuwaas oo ku dhacay inuu noqdo mid ka addeecdeen. No, Ciise waxa uu ahaa Adam cusub kuwaas oo u yimid in ay naga wakiil cusub leydin. addeecidda Ciise Ilaah ka farxiya ma aha oo kaliya in la joogo in, laakiin Ciise Adeeca noo ah in aan noqon karaa inuu Ilaah ka farxiyey. Ciise ma waxa aannu ku samayn couldn't. Waxa uu maraa baaritaano in Adam gudbi karin iyo in Israa'iil kaga gudbi karin - oo aan ninna ka hor ama ka dib isaga gudbi karin. Ciise Adeeca halkaas oo midkayana of waayeen. Ciise guul ma jiro cadaawayaashooda oo naga mid ah adkaan kari waayeen. Iyo guuldaradii this gaar ah, oo lamadegaanka ku yaal, waxaa ku fiiqaya in ay guuldarada guul Shaydaanka dhici doonaa dhamaadka injiilka Luke's.
Inkastoo Yoonis in ay xitaa u Wacdiyeysaan cadaawayaashiisa aad u qadhaadh, Rabbi Ciise dhulka u yimid oo u dhintay cadaawayaashiisa. On iskutallaabta Ciise bixisay waqti kasta in aan ku bixiyay in jirrabaadda. Mar kasta oo hal. Waayo, rumaystaha, ma jiro mid ka mid dembi leh annaga oo ah in Ciise uusan ku bixiso. Markaasaa Ciise xabaasha laga kacay, dembi adkaadeen, dhimashada, oo Ibliisku. Ibliisku waxaa adkaaday. Oo haddii aan lahaa dembiyadeenna soo noqdaan oo ay ku riday Rumaysad noo ayaynu Masiix ugu heli karaan dhammaan abaal ah in uu kasbaday. Maxaa yeelay, addeeciddooda aawadeed Ciise waa in aan na niyad jabinaya, waa na dhiiri.
Toddobaadkan marka aad la jirrabo dembaajiyey, aad ku xusuusatid in cadowga ayaa hore looga adkaaday Eebihiin. ha aadin inaad siiso in aad dembi. jirrabi ayaa laga badiyay. silsilado waa la jebiyey. Ku socda xorriyadda iibsaday aad ugu iskutallaabta. Ha dhalidda in baahidii cadowga a adkaaday. Ciise wuxuu u dhintay iyo kor u kacday, in aan noqon lahaa in ay iska caabin jirrabi awoodi, iyo isagaana sida. Waxaan indwelled Ruuxa aad u isku mid ah iyo waxaan mushtarka hub aad u isku.
Markii aan la jirrabo, Kaalay nala xasuusto in Ilaah kuu ogolaanayaa oo jirrabaadda isticmaalaa, in tabar ma aha cudur daar ah in la siiyo si jirrabaadda, iyo in jirrabi ayaa hore looga adkaaday.
Qoraaga Cibraaniyada eegayaa jirrabaadda iyo helaa dhiirigelin weyn:
Waayo, ma aynu lihin wadaad sare waa kuwa ka nixi karin itaaldarradeenna, laakiinse waxaannu yeelanaynaa ah Ruux la jirrabay si kasta, sida aynu nahay -yet ahaa oo aan dembi lahayn. Ina keena aynu ka dibna u Dhawaanina carshiga nimcada kalsooni, si aynu naxariis u qaadanno oo u helno nimco ina caawisa wakhtiga baahida our. (Cibraaniyada 4:15-16)
Rabbi Ciise ka nixi karin nala. Waxa uu la jirrabay sida aynu la jirrabo, laakiin wuxuu waligii siiyey isaga wadaadka sare kaamil ah samaynta. Sidaas awgeed, waxaan carshigiisa u tagi kartaa si kalsooni leh, baryayay, waayo, naxariistiisa iyo nimcadiisa. Kaalay nala isaga si ay u tagaan hadda.
Waad ku mahadsan tahay wax badan buu u leeyahay waxbaridda ah ! Waa sidaas u weyn in aad ogaato sida ay wax badan noo Ilaah wuxuu og yahay jirrabaaddo kasta oo aan wajihi ! Waa sidaas u weyn in la ogaado in Ciise ayaa jirrabay oo aan ku siiyey, iyo in la ogaado in Ibliisku waxaa adkaaday !!
Waad ku mahadsan tahay wax badan u dhiirigelinta ! Ilaahay ha barakeeyo aad wasaaradda iyo qoyskaaga.
(Waan ka xumahay, waayo, ingiriisiga, Waxaan ahay Faransiiska)